Moments Neshamwari 34
Chii chakakosha kusiyana pakati peTheosophy uye New Thinking?
Zvinangwa, nzira uye kujeka.
Misiyano iyi haina kubva pane hurukuro uye zviito zvevanodaidza theosophists kana zvevatsva vanofunga, asi pamabhuku evanoyambira uye ayo emafungiro matsva. Nhengo zhinji dzezuva razvino theosophical nzanga dzinoita zvirevo uye kuita zvisina musoro sezvakangoita vazhinji vevanhu veNew Thought. Seti yega yega yevanhu inoratidza chikamu chechisikirwo chevanhu icho chiri kushanda panguva iyoyo. Dzidziso dzeTheosophy ndeiyi: karma, iwo mutemo wekutonga; kuberekwazve, kusimudzira kwepfungwa uye nenyaya yemuviri uye mimwe miviri nenzira yekudzoka kwepfungwa kubva kuupenyu kuenda kuhupenyu mumiviri yemunhu kupinda munyika ino yepanyama; bumbiro remanomwe remunhu, nheyo nekudyidzana kwavo zvinopinda mukugadzira kwemunhu; iko kugona kwemunhu, kuti vanhu vese vanokwanisa kuve vamwari uye kuti zviri musimba remunhu wese kuti asvike pakukwana uye kuve nehunyanzvi uye nehungwaru mumwe kuna Mwari, Murangariro weVose; hushamwari, kuti varume vese vanobva kune mumwechete mumwechete iwo manyowani uye kuti varume vese vane hukama uye zvakafanana muchimiro kunyange vachisiyana padanho rekukura, uye kuti pamweya vese vane basa uye vanoenderana kune vamwe sevomumhuri imwe, uye kuti ibasa renhengo imwe neimwe yaro kubatsira nekubatsira vamwe maererano nesimba rake nezvaanokwanisa.
Zvinangwa zvinotsigira kana kuti zvinongedzerwa mumabhuku evazivi venyama uye zvevatsva vanofunga zvakasiyana zvakasiyana. Zvinangwa sekukurudzirwa nedzidziso dze theosophical ndeizvi: kutevedzera zvinodiwa neKarma nekuzadzisa zvisungo zveumwe munhu, ndiko kuti, basa, nekuti rinodikanwa nemutemo wekururamisira; kana nekuti nekudaro nekuita saizvozvo, mumwe uchagadzira karma yakanaka; kana nekuti ndizvo chaizvo, mauri basa racho uchaitwa usingatyi uye usina tariro yemubairo. Kufa kana kusakwana kunotarisirwa mberi kwete nekuti nekusvika kwayo mumwe achapukunyuka mabasa nekunakirwa nezvibereko zvawo, asi nekuti nekukusvikira pane mumwe kugona kugona kubatsira vamwe mukukunda kwavo kwekusaziva, kusuwa pamwe nekusuwa uye kusvika pachinangwa chimwe chete. Zvinangwa zvinoita kuti mutsva uyu aite chiito chekutanga kuve kwake kwakanaka, kazhinji kune zvakanaka mumuviri, uye nekunakidzwa kweizvozvo, uyezve kuudza vamwe kuti naivowo vanogona kuita kuti zvishuwo zvavo pamwechete nemitsetse iyi zviwane.
Maitiro ayo Teiro anopa zano kuti awane zvinhu zvacho kuzviita chero kupi zvako kwaanoiswa, nekuita, asina udyire kuitira vamwe zvakanaka, nekudzora zvishuwo kuburikidza nehungwaru, nekuvhenekerwa uye nekushandisa huwandu hwenguva hwakafanira, mari uye shandai pakuparadzira dzidziso. Izvi zvinoitwa, pasina mari kana kubhadharisa chero mhando. Nzira dzeiyo Nyowani Tsva ndeyekuvimbisa mabhenefiti epanyama uye kugutsikana kwepfungwa, uye mari inobhadharirwa makosi ekuraira mune yekufunga uye yekushandisa inoshanda.
Mumwe musiyano ndewekuti dzidziso dzeTheosophy ndedzechokwadi, pamusoro pechirevo uye chirevo; nepo, muNew Thought nzanga zvisirizvo zvinotaurwa zvinoitwa, uye kushomeka kwechokwadi musumo nehunyanzvi zvinoratidzwa mudzidziso. Dzidziso dzeMutsva dzeMutsva dzinotaura zvinyoro-nyoro, kana zvachose, yeKarma uye kuberekwa patsva. Vamwe vevanyori vavo vanotaura nezve izvo zvinomwe zvinomwe kana nezvevamwe vacho; vanobata kuti munhu wamwari kubva uye chokwadi, uye vanotenda kuti varume ihama. Asi pane kushomeka kwechokwadi mune idzi dzese dzidziso dzeMufungo mutsva uyo musiyano wakasarudzika kubva kuzvirevo zvakananga uye zvinosimbisa zvinoitwa mumabhuku eiyoophotos.
Zvinotisiyanisa neizvi ndezvekuti: vavariro inosimudzira muteveri weTheosophy kusava noudyire uye kushumirwa nechinangwa chekuti azive Mwari ari mukati, nepo, chinangwa chinomutsa mutsva mutsva kushandisa ruzivo rwakadai uye mukana. Nzira dzekushanda kweanotevera Theosophy kuparadzira dzidziso pasina mubhadharo; nepo, iye nyowani nyowani akataura kuti mushandi akafanirwa nemubhadharo wake uye anopomera mari yemibairo, kana anonzi mabhenefiti, anopihwa. Muteveri weTheosophy ane zvinhu zvakajeka uye dzidziso dzakaparadzika mukati mavo, nepo kubatika kweChinhu Chitsva hakusati kuri kwedzidziso, asi ane tariro uye anofara uye ane chivimbo chekuti achawana zvese zvaanoshuvira. Iyi misiyano zvichienderana nedzidziso uye mabhuku, asi iyo inonzi theosophist ndeye munhu uye isina simba pamwe neiyo nyowani nyowani; mumwe nemumwe anoita zvinoenderana nechimiro chake zvisinei nechero chitendero chake.
Iko Theosophy inotanga Nyongano Itsva painopera. Itiofosi inotanga nebasa romunhu muhupenyu, uye inovavarira kuwana kukwana mune yepanyama; uye kuburikidza nekuperera iko, kukwana munyika yemweya. Pfungwa nyowani inotanga nekutenda nekufara nekutenda kwehumwari hwayo, uye inoita kunge ichipera nemuviri, hupfumi, kubudirira uye mufaro-dzimwe nguva uye kwenguva iripo.
Chii chinokonzera kenza? Pane chimwe chinhu chakazivikanwa kurapwa nacho here kana kuti imwe nzira yekurapa inofanira kuwanikwa musati mushonga wayo unogona kuitwa?
Pane zvakakonzera uye zviri kure zvikonzero zvegomarara. Izvo zvinokonzeresa ndizvo izvo zvinosimbisirwa muhupenyu hwazvino. Izvo zvikonzero zviri kure zvinobva mukati uye zvinouya kubva pachiitiko chendangariro mune zvakapfuura kuberekwa kwevanhu. Izvo zvinokonzeresa kuoneka kwegomarara senge kuputika kana kuenderera mberi kwekushatisa, izvo zvinokonzeresa kutenderera kweropa, tishu kupfuurira uye izvo zvinopa ivhu rakanakira kukura, izvo zvinofungidzirwa sehosha yegomarara, kana vanogona zvinokonzerwa nezvikafu zvisina kunaka izvo muviri usingakwanise kuzviita kana chikonzero uye neicho chinokonzera kenza hutachiona, kana kuti chirwere ichocho chinogona kunge chiri nekuda kwekudzivirira, kudzvinyirira nekuuraya, asi kuramba uri mumuviri weakakora mvura panguva yekuita zvepabonde. . Iko kuuraya, kuchengetedza uye kuunganidzira mumuviri wehupenyu hutachiona hutachiona hwakakosha wevhu rakapfuma iro ivhu rinodana kenza hutachiona kuti huripo; nekuenderera mberi kwemuitiro uyu muviri unowanda nekenza yekukura. Zvekare mamiriro ezvinhu akafanana anogona kupihwa nekusakwanisa kwemuviri kuunza hutachiona hwakakosha mukukura, kukundikana kuita izvo hutachiona hwehupenyu hunofa nekuora uye nekuramba uri mukati memuviri usingakwanise kutora kana kukwidza.
Izvo zvikonzero zviri kure zvinounzwa pamusoro nepfungwa kubva pane zvaakaita zvisati zvaitika munyama umo pfungwa dzakatora chikamu mukuwedzeredza uye nekuzvishingisa, asi mairi mukati mekudzikiswa hazvina kukohwa izvo zvawakadyara, nenzira imwecheteyo kuti ivo vakapindwa muropa tsika dzisina kunaka uye dzisiri dzekurara muhupenyu hwazvino dzinogona kunge dzisiri kukohwa, asi kudyara, izvo zvinokohwa munguva yemberi - kunze kwekunge vamisa zvinopesana nepfungwa iripo uye chiito. Kunze kwekunge cancer ikachinjiswa mumuviri kana kuiswa, zvese zviitiko zve cancer zvinokonzerwa nekarmic zvinokonzeresa; ndiko kuti, ivo vanokonzerwa nekuita uye kudyidzana pakati pepfungwa nechishuvo chiri mumunda wemuviri wemuviri. Ichi chiitiko pakati pepfungwa uye chishuvo chinofanira kuve chakaitika muhupenyu hwazvino kana muhupenyu hwakatangira. Kana zvikaitika muhupenyu hwazvino, zvinozotaridzirwa sechikonzero chekenza chekenza kana kutarisisa kwazvinanga kwazviri. Kana pasina chimwe cheizvi kana zvimwewo zvinangwa zvakaiswa muhupenyu hwazvino, mune iyo kenza inowoneka, ipapo chirwere chiri nekuda kwechikonzero chiri kure icho chingazivikanwa. Mumwe anogona kuita zvinopesana nemutemo kwenguva, chete, asi anoongororwa munguva. Sero rekenza uye kukura kwayo kunogona kuparadzwa, asi hutachiona hwegomarara harusi hwepanyama uye haugone kuparara neimwe nzira yemuviri. Hutachiona hwegomarara ndehwemasere uye ndiyo mhando iyo sero inokura nekukura, kunyange sero re cancer rinoratidza chimiro chechirwere chegomarara. Sero re cancer uye hutachiona hunogona kurapwa nekushandurwa nenzira dzemuviri.
Kune kurapwa kwekurapa kenza, uye kurapwa kwakaitwa. Kurapa kwakagadzirwa naSalisbury kurapwa. Kurapa uku kwave kuchizivikanwa kwemakore anopfuura makumi mana, asi vanachiremba vashoma vakachiyedza. Iyo Salisbury kurapwa kwezvirwere haina kuwana favour nebasa rekurapa. Vashoma vakamboyedza nenzira kwayo, vakava nezvakanaka zvinorapa mukurapa kwezvirwere zvinonzi zvisingarapike. Hwaro hweSalbbury kurapwa ndiko kudya kwemukaka wakanyoroveswa nyama yemombe kubva kwese kwakabviswa mafuta uye mafirita uye anorema matipi, uye idya yacho inopfuudzwa nokunwa kwemvura inopisa isingasviki awa nehafu uye isati yasvika uye mushure mekudya . Uku kurapa kwakanyanya kureruka uye kwakachipa kune varapi vazhinji. Zvakadaro kurapwa uku, kana ikashandiswa nehana, inorova pamidzi, uye kurapa kuchirwere kwese kunozivikanwa chirwere. Yakanyatso bikwa nyama yakaonda, kubva pairi zvabviswa minwe nemafuta, uye mvura inopa zvirinyore uye zvakanyanya kukosha zvekuchengetedza kwemitumbi yemunhu ane hutano. Kudya nyama yakaonda uye kunwiwa kwemvura yakachena kunokanganisa muviri wenyama nemupikisi wayo wechikadzi, iwo muviri muviri. Nyama yakatsiga haingape izvo zvinonaka pakukura nekukura kwehutachiona chero hupi hunogona kuunza chirwere kumuviri umo nyama yakaonda inotorwa. Kana kupihwa kwechikafu kuchinge kwadzivirirwa kubva kuchirwere uye chikafu chakadai chichitorwa mumuviri icho chisingakwanise kushandiswa nechirwere, asi chine hutano kumuviri, chirwere chinopera. Saka kana nyama yakaonda ikaendeswa mumuviri, haizopi chikafu chakanakira kenza kana humwe hutachiona hutachiona, uye kana chimwe chikafu chichibvumidzwa, kukura husina hutano mumuviri zvishoma nezvishoma unofa wozonyangarika nehurongwa hwekufa nenzara. Izvi zvinogona kutora makore uye muviri ungaite sengeve uye unzwe kusasimba uye kupera simba mumuviri. Aya mamiriro anokonzerwa nekuerera zvishoma kwezvirwere zvemuviri, asi kana kurapwa kukaramba kuripo mumuviri kuchawanazve hutano. Izvo zvinoitika panguva yekuita izvi ndezvekuti muviri wekare wakarwara unenge uchibvumidzwa kufa uye ugobviswa, uye munzvimbo yacho mauri kukura uye nekuvandudzwa zvishoma, mumwe muviri wenyama wakavakirwa pane yakaonda nyama. Iko kunwa kwemvura yakabikwa inotorwa inopisa kweawa nehafu pamberi uye mushure mekudya kwakakosha sekudyiwa kwenyama, uye nyama haifanirwe kudyiwa kuporesa chirwere pasina kunwa mvura inopisa uye panguva dzakataurwa. Iko kunwa kwehuwandu hwemvura inopisa kunoregedza asidhi uye chinhu chinokuvadza uye kuvapfuura kubva mumuviri, uye mumvura iyoyi chinhu chinobva chabviswa kubva mumuviri. Nyama ndicho chikafu chemuviri; mvura inodiridza uye inoshambidza muviri. Nyama yakaonda inovaka masero emuviri ane hutano, asi nyama yacho haigoni kubata kana kukanganisa zvakananga kenza isingaoneki yegomarara. Mvura inopisa inoita izvi. Mvura inopisa inobata uye inoshandura kenza utachiona uye humwe hutachiona mumuviri uye inochinja idzi maererano nezvinodiwa nemuviri.
Muviri wakavakirwa pachikonzero ichi wakachena uye wakanaka uye chinhu chakanaka chekushandisa pfungwa. Nekurapa kwakadaro kwete chete kuti muviri wemunhu uye wemuviri unochinja uye wakagwinya, asi izvo zvishuvo zvichave zvakakanganisika, zvichikomberedzwa uye zvichidzidziswa. Iyo chete Salisbury kurapwa kwezvirwere inobata zvakananga nemuviri wepanyama iyo iri munda wechirwere chegomarara uye nemuviri weastral unova chigaro chechirwere chegomarara. Nekurapwa kweSalbbury pfungwa zvakare inodzidziswa, zvisina kunanga, nekuti kufunga kukuru uye kunofanira kuve kuchiratidzwa nepfungwa kuitira kubata muviri uye kuchiva zvakanyanya kurapwa. Vazhinji vanokundikana mukurapwa nekuti ivo havachaomerera pariri uye nekuda kwekusagutsikana kwepfungwa uye kumukira izvo zvinowanzoonekwa mune avo vanoedza uye izvo zvavasina kukunda. Kana kupanduka kwacho kukagumiswa uye kusagutsikana kwatsiviwa nemurwere uye nemafungiro ehupfungwa hwepfungwa, kurapwa kwacho kuchaguma. Nekudzidzira muviri wemunhu maererano nenzira dzinonzwisisika, pfungwa dzinozvirongedza nekuvhiyiwa uye nekudzidza kushomeka kwete kwemuviri chete asiwo nezvekunetsa kwayo uye kusagadzikana. Kana paine hukama hunobatana pakati pemuviri nechirwere chepfungwa haugone kuwana chero imba mumuviri iwo. Hosha yegomarara nesero hazvingakonzeri chirwere kunze kwekunge bumbiro remuviri risingakwanise kuzvishandisa. Kune hutachiona hwakawanda hwegomarara nemasero munenge muviri wese wemunhu. Muchokwadi makumi ezviuru ehutachiona anobhururuka mumuviri wemunhu. Chero chipi zvacho chinokonzeresa chirwere chinotapukira kana chimiro chemuviri chisina kudaro chinozochengetedza hutachiona muhurongwa uye nekuchengetedza muviri wakarongeka. Utachiona hwezvirwere asi zvisingazivikanwe teem mumuviri, asi muviri nepfungwa hazvisati zvapa mamiriro ezvinhu izvo zvinoita kuti hutachiona uhwu huzivikanwe pasi rose sehosha dzakakosha. Ivo vanogona kuverengedza kuhufakazi chero nguva apo pfungwa dzinoziva nezvechirwere chinogona kuitika, uye mamiriro e-pathological anopiwa nekudya zvisina kunaka uye kurarama.
Iyo kenza hutachiona uye sero ndezvimwe zviri munhoroondo nekusimudzirwa kwevanhu apo muviri wemunhu waive bonde. Panguva iyoyo zvainge zvisingaite kuti chirwere ichi chave kunzi cancer nekuti ndicho chaive chinja sero raishandiswa mukuvaka miviri. Mujaho wedu uripo wangosvika padanho mukushandurwa kwarwo kunounza kune imwe ndege senge iyo iyo nhangemutange yakapfuura mukumisikidzwa kwayo, ndiko kuti, iyo ndege yakaitika chinogadziriswa kana kukura kweanhengo yebonde-miviri yemukadzi miviri miviri yechirume miviri yemiviri uye miviri yemunhukadzi yatinoziva.
Muviri wenyama unovakwa uye unochengeterwa nekusikwa nekugara nekuparadzwa kwehutachiona. Ihondo yehutachiona. Muviri unosimbiswa zvinoenderana neimwe fomu yehurumende. Kana ikachengeta fomu yayo yehurumende inochengetedza kurongeka uye nehutano. Kana kurongeka kukasachengetedzwa, mapato anopikisa anopinda muhurumende achikonzera kusagadzikana, kana zvikasakonzera kuchinja kana kufa. Muviri haugone kuramba usingashande kana kungoita. Mauto ehutachiona anovaka muviri pamwe nemamwe mauto ehutachiona anodzivirira kubva pakurwiswa uye kupinda kweanopokana noutachiona anofanirwa kugona kutora uye kupinza vapambi. Izvi zvinoitwa kana muviri uchinge wadya chikafu chinovaka, zvinwiwa zvemvura yakachena, uchifema mweya wakachena, uye murume anonatsa pfungwa dzakadzikama uye anoyedza kufunga nezve pesvedzero nezviito maererano nekwavo kwakaringana.